Ziyoni risingabereki rinova nevanakomana vakawanda (1-17)
Jehovha, murume weZiyoni (5)
Vanakomana veZiyoni vachadzidziswa naJehovha (13)
Zvombo zvekurwisa Ziyoni hazvizobudiriri (17)
54 “Pembera nemufaro, iwe mukadzi ngomwa, asina kubereka!+ Fara uye shevedzera nemufaro,+ iwe asati ambova nemarwadzo ekusununguka,+Nekuti vanakomana* veuya akasiyiwa vazhinjiKupfuura vanakomana vemukadzi ane murume,”*+ anodaro Jehovha. 2 “Ita kuti nzvimbo yetende rako iwedzere kukura.+ Tambanudza machira etende etebhenekeri yako huru. Usarega, rebesa tambo dzako dzetende,Uye simbisa hoko dzako dzetende.+ 3 Nekuti uchawedzera uchienda kurudyi uye kuruboshwe. Vana vako vachaita kuti marudzi ave avo,Uye vachagara mumaguta akasiyiwa ava matongo.+ 4 Usatya,+ nekuti hauzonyadziswi;+Uye usanyara, nekuti hauzoodzwi mwoyo. Nekuti uchakanganwa nyadzi dzeudiki hwako,Uye hauzoyeukizve kuzvidzwa kweuchirikadzi hwako.” 5 “Nekuti Muiti wako Mukuru+ akaita semurume* wako,+Jehovha wemauto ndiro zita rake,Uye Mutsvene waIsraeri ndiye Mudzikinuri wako.+ Achanzi Mwari wenyika yese.+ 6 Nekuti Jehovha akakushevedza sekunge kuti waiva mudzimai akasiyiwa uye ari kushungurudzika,*+Semudzimai akaroorwa achiri mudiki achibva azorambwa,” anodaro Mwari wako. 7 “Ndakakusiya kwenguva diki,Asi ndichakudzosa netsitsi huru.+ 8 Ndakakuvanzira chiso changu kwenguva pfupi ndakatsamwa kwazvo,+Asi nerudo rusingachinji uye rusingaperi, ndichakunzwira tsitsi,”+ anodaro Mudzikinuri wako,+ Jehovha. 9 “Izvi zvakaita semazuva aNoa kwandiri.+ Sezvandakapika kuti mvura yaNoa haichazofukidzizve nyika,+Ndinopikawo kuti handichazokutsamwirizve kana kukutuka.+ 10 Nekuti makomo angabviswaUye zvikomo zvingazununguswa,Asi rudo rwangu rusingachinji haruzobviswi pauri,+Uyewo sungano yangu yerugare haizozununguswi,”+ anodaro Jehovha, iye anokunzwira tsitsi.+ 11 “Haiwa iwe mukadzi anotambudzika,+ anokandwa-kandwa nedutu, asina kunyaradzwa,+Ndiri kuvaka matombo ako nedhaka rakasimba,Uye faundesheni yako nematombo anonzi safaya.+ 12 Ndichagadzira shongwe dzako nematombo anonzi rubhi,Magedhi ako nematombo anopenya,*Uye miganhu yako yese nematombo anokosha. 13 Vanakomana* vako vese vachadzidziswa naJehovha,+Uye rugare rwevanakomana* vako ruchava rukuru.+ 14 Uchasimbiswa mukururama.+ Uchava kure chaizvo nekudzvinyirirwa,+Hapana chauchatya uye hapana chichakuvhundutsa,Nekuti hapana chichaswedera pedyo newe.+ 15 Kana pakava neanokurwisa,Handisi ini ndinenge ndamurayira. Munhu wese anokurwisa achakundwa.”+ 16 “Inzwa! Ndini ndakasika mhizha,Iyo inopfutidza moto wemarasha,Yogadzira chombo pabasa rayo. Ndiniwo ndakasika munhu anoparadza kuti aparadze.+ 17 Hapana chombo chakagadzirirwa kukurwisa chichabudirira,+Uye uchapa mhosva rurimi chero rupi zvarwo runokupomera pakutongwa. Iyi inhaka yevashumiri vaJehovha,Uye kururama kwavo kunobva kwandiri,” ndizvo zvinotaurwa naJehovha.+
^ Kana kuti “ana tenzi.”
^ Kana kuti “satenzi.”
^ ChiHeb., “ane mweya wakarwadziswa.”
^ Kana kuti “nematombo akaita semoto.”
^ Kana kuti “rwevana.”